आफ्नै भाउजुले कोठामा केटा बोलाएर ४ दिनसम्म गराइन् बलत्कार , १२ वर्षकी बालिकाको मन रुवाउने बयान (भिडियो हेर्नुस्) - dautarimedia.com
आफ्नै भाउजुले कोठामा केटा बोलाएर ४ दिनसम्म गराइन् बलत्कार , १२ वर्षकी बालिकाको मन रुवाउने बयान (भिडियो हेर्नुस्)
मोरङ मा विश्वास नै गर्न नसकिने घटना सार्वजनिक भएको छ । भाउजुलाई आमाको रुप मानिन्छ । आमा पछि सबैभन्दा नजिकको नाता भाउजुकै हुन्छ । आमा पछिको माइती भाउजु नै हो । तर भाउजुले नै आफ्नो १२ वर्षको बालिका नन्दलाई नराम्रो काम गराएको खुलेको छ । लामो समय सम्म कोठामा बन्दी बनाएर बालिकालाई नराम्रो काम गराएको खुलेको हो । एउटै घरमा बस्दै आएका थिए नन्द भाउजु तर भाउजुले अन्तै लिएर गएर अनैतिक काममा संलग्न गराएको खुलेको छ ।
२०६६ सालको जेठमा जन्मिएकी बालिकालाई फकाएर भाउजुले नराम्रो काममा लगाएको बालिकाले बताएकी छन् । सोमवारे सम्म जाउँ भनेर भाउजुले लिएर गएको बताएकी छन् । सोमवारे पुगेपछि दुई जना युवक साइकलमा आएका थिए । भाउजुले नै केटाहरु बोलाउनु भएको रहेछ । एक जनाको घरमा लिएर जानुभएको थियो । जन्मदिन छ भनेर लिएर जानु भएको थियो तर त्यहाँ जन्मदिन रहेनछ । केटाहरु बोलाउनु भएको थियो ।
Previous: के पुण्य गौतम प्रधानमन्त्री बन्दै छन ? पुण्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यि व्यक्तिले यस्तो सम्म गर्ने, यतार्थ के हो ? – भिडियो सहित
Next: एउटै घरमा भेटिए एक माहिलाको दुई श्रीमान ( भिडियो सहीत )